Mushoor - कौसी खेती गर्दै हुनुहुन्छ ? असारमा यी तरकारी फलाउनुहोस्।
कौसी खेती गर्दै हुनुहुन्छ ? असारमा यी तरकारी फलाउनुहोस्।
1 Jul 2021 -3min read
कौसी खेती आजकल नेपालका सहरका वासिन्दाको लागि एकदमै आकर्षणको विषय बनेको छ। अनि यसका धेरै फाइदाहरु पनि छन्। कसैको लागि यो आफ्नो दैनिक कार्यबाट एकछिन विश्राम लिएर प्रकृतिसंग जोडिने अवसर हुन्छ। कसैलाइ आफैले घरमा विषादी रहित तरकारी तथा फलफुल फलाएर खान स्वस्थ र आनन्दित लाग्छ। कसैलाई आफ्नो कौसी बारीमा काम र हिंडडुल गर्दा शारीरिक व्यायाम हुन्छ।
त्यसमाथि आजकल कौसीखेती गर्न चाहिने तरिका र सामान सजिलै पनि पाइन्छ। यससम्बन्धी तालिमका लागि इन्टरनेट मा धेरै गाइड र भिडियो हरु राखिएको पनि छ। त्यसैगरी कौसी खेती गर्न सघाउने विभिन्न संस्थाहरु पनि एकदमै सक्रिय भएर लागेका छन्। सरकारले पनि यस्तो कार्यक्रमहरु लाइ सघाउने तथा प्रोत्साहन गर्ने काम सुरु गरेको छ। हामीले पनि आफ्नो वेबसाइटबाट यस्ता जानकारी प्रदान गरी कौसी खेतीको प्रवर्धन गर्न खोजेका छौं।
त्यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब असार महिनामा कौसीमा के के तरकारी लगाउने त ? के लगाउदा राम्रो उब्जनी हुने र फाइदा हुने छ त ? कृषिका विज्ञ साथीहरु ले भने बमोजिम हामीले तल लेखेका छौं।
तल्लो पहाडी क्षेत्रमा असारको सुरुवात मा करेला लगाउन सकिन्छ। यसको फल उब्जन ५० देखि ६० दिन लाग्छ। करेला लगाउँदा यसको बिउलाइ कम्ति मा १ ५ देखि २ मिटरको अन्तरमा राख्नुपर्छ। यसलाई फ्राई गरेर वा अचार वा जुस बनाएर पनि खान सकिन्छ । करेलाका विभिन्न फाइदाहरु छन्। यसले रगतमा सुगरको मात्रा कम गर्न सक्छ। साथै कसैलाई कब्जियत वा पाचनमा समस्या भएपनि यसको नियमित सेवन गर्नाले त्योबाट राहत दिन्छ।
चुकन्दर कौसीमा लगाउन सकिने एउटा राम्रो बाली हो। अनि चुकन्दर फलाएर खानुको धेरै फाइदाहरु छन्। उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरुमा यसले छिट्टै रक्तचाप कम गराई राहत दिन सक्छ। दैनिक व्यायाम गर्ने तथा खेलकुदमा लाग्ने लाइ यसले स्टामिना बुस्ट गर्न सक्छ। वजन कम गर्न खोज्ने लाइ पनि यसले निक्कै सघाउने गर्छ।
गाँजर नेपालका उच्च पहाडमा जेठ देखि साउनमा, मध्य पहाडमा भाद्र देखि मङ्सिरमा, र तराईमा असोज देखि कार्तिकमा फ़लाउन सकिन्छ। नेपालमा सबै भन्दा बढी फलाइने गाँजर न्यु कुरोदा, कुरोदा मार्क, र नान्टिस जातको हो। गाँजर स्वास्थको लागी एकदमै फाइदाजनक छ। वजन कम गर्ने, कोलेस्ट्रोल घटाउनेका साथ साथै यसले आँखालाइ पनि राम्रो गर्छ।
कौसी खेती गर्नेहरुको रोजाइमा पर्ने बाली हो काँक्रो। उच्च पहाडमा जेठ देखि साउन सम्म, मध्य पहाडमा फागुन देखि जेठ वा साउन देखि असोज सम्म, र तराईमा पौष देखि माघ वा असोज देखि मङ्सिर सम्म यसलाई लगाउन सकिन्छ। काँक्रो लाइ धेरै तरिकाले खान सकिन्छ। धेरै जसो मान्छेले अचार बनाएर वा तेत्तिकै वा नुन खुर्सानी संग खाने गर्छन। यसमा थोरै क्यालोरी हुने तर धेरै भिटामिन र पौष्टिक तत्त्व हुने गर्दछ। पानीको मात्रा धेरै हुनाले डिहाइड्रेशन बाट पनि यसले बचाउँछ।
ब्रोकाउली उच्च पहाडमा जेठ देखि साउन सम्म, मध्य पहाडमा साउन देखि माघ सम्म, र तराईमा असोज देखि कार्तिक सम्म लगाउन सकिन्छ। यसमा अत्याधिक मात्रामा विभिन्न प्रकारका पौष्टिक तत्त्व हुन्छन्। यसले मुटुलाइ स्वस्थ बनाउने, हड्डीहरु लाइ बलियो बनाउने, र आँखालाइ पनि राम्रो गर्छ।
शलजम उच्च पहाडमा जेठ देखि साउन सम्म, मध्य पहाडमा साउन देखि फागुन सम्म, र तराईमा असोज देखि मङ्सिर सम्म लगाउन सकिन्छ। मानिस तथा गाईवस्तु दुवैले यसको सेवन गर्ने भएकाले यो संसारकै एउटा महत्त्वपूर्ण तरकारी बाली हो। यसको जरा र पातहरु पनि खान सकिन्छ। यसमा अत्याधिक मात्रामा विभिन्न प्रकारका पौष्टिक तत्त्व हुन्छन्। यसले रगतमा चिनी र कोलेस्ट्रोल को मात्रा नियन्त्रण गर्ने, ब्याक्टेरिया विरूद्ध लड्ने, र हड्डी र कलेजोलाइ पनि स्वस्थ राख्ने गर्दछ।
2020 Mushoor. All Rights Reserved.